You are at:Home»Health»Category: "Fitness"
ခါးအဆီကျစေမယ့် ၁၅ မိနစ်လေ့ကျင့်ခန်း
အဆီတွေခါးမှာပဲလာလာစုနေပြီး ပေါင်တွေတုတ်လာလို့ စိတ်မညစ်ပါနဲ့ မတ်မတ်တို့ ညီမလေးတို့ရေ ! အချိန် (၁၅) မိနစ်ပဲပေးရတဲ့ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ဆို တစ်လအတွင်း ခါးဆိုဒ် ၂ဆိုဒ်လျော့သွားစေရမယ်လို့ အာမခံပါတယ်။ ဝတာတော့…
အကောင်းဆုံး Bra ဘယ်လိုရွေးဝယ်မလဲ?
အကောင်းဆုံး Bra ၊ Sport Bra ဆိုတာ အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေလိုပါပဲ။ သူကတော့ သင်ဘာလုပ်လုပ် အထောက်အပံ့ပေးပြီး ကြည့်ကောင်းစေဖို့၊ ခံစားမှုကောင်းစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ တစ်ချို့တွေက ဟောင်းနွမ်းနေ့တဲ့…
ထမင်းစားဝိုင်းလေးမှာ ရာသီပေါ်အသီးအနှံဖြစ်တဲ့ သရက်သီးလေးထည့်သွင်းတတ်တာ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ထုံးစံပါပဲ။ အချိုပွဲအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တို့စရာအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ထမင်းစားဝိုင်းမှာ တွေ့ကြပေမယ့် သရက်သီးရဲ့ အကျိုးတွေကိုတော့ အသိနည်းကြပါတယ်။
သင်မသိသေးတဲ့ ၀ိတ်ကျမြန်တဲ့အချက် (၆) ချက်
၀ိတ်ချခြင်းဆိုတာလွယ်ကူတဲ့ အလုပ်တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ဂရုတစိုက်နဲ့ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နေ့သင်လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိနိုင်မှာပါ။ ခုရေတွင်းတူး ခုရေကြည်သောက်ချင်လို့တော့မရဘူးပေ့ါနော်။ သင်ဝိတ်မြန်မြန်ကျမယ့် နည်းလမ်းတွေကိုတော့ Digital Rockstar ကဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
သဘာဝအတိုင်း အဆီကျလှပစေမယ့် နည်းလမ်း များ
အင်တာနက်ပေါ်မှာ Weight ချဖို့အတွက် မကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းအချက်အလက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါဆိုဘယ်နည်းလမ်းတွေက အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာပါပဲ။
Gym သွားဆော့တဲ့အခါ အခက်အခဲရှိတတ်ကြပါတယ်။ သင်တန်းမှာအဆင်မပြေတာ၊ ကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်တာမျိုးစတာတွေဟာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိကြပါတယ်။ ဒီတော့ Gym တစ်ခုမှာသွားဆော့တဲ့အခါ ဘာတွေ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ နည်းနည်း လေ့လာထားဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတော့…